Izindleko zamasheya Microsoft Corporation
Imisebenzi ye-Microsoft Corporation namuhla, intengo ye-MSFT esitokisini manje, yabelana ngamanani we-Microsoft Corporation.
Microsoft Corporation Inani lentengo Ishadi le-inthanethi Umlando wezindleko I-Capitalization Izihlukaniso Inzuzo Inzuzo Ukulinganisa
Intengo yesitoko ye Microsoft Corporation in US dollar inenani elijwayelekile kusuka kuyo yonke imithombo. Intengo yesitoko se-stock quote inenani eliphakathi nosuku. Yonke imisebenzi yokushintshaniswa kwe-crypto yenziwa ezimakethe zokushintshana kwe-crypto. 1 isitokhwe se Microsoft Corporation yi 206.26 stock of US dollar. 1 isitokhwe se Microsoft Corporation ibize kakhulu nge- 7.11 US dollar. Microsoft Corporation intengo yesitoko inyuke ngo- US dollar.
Microsoft Corporation inani lesabelo senkampani ku US dollar
Esontweni eledlule, Microsoft Corporation ithengwe nge- 195.15 US dollar yase-Ukraine. Ezinyangeni eziyisithupha ezedlule, Microsoft Corporation ithengiwe 158.62 US dollar. Ngonyaka owedlule, Microsoft Corporation ithengwe nge- 138.40 stock of US dollar yase-Ukraine. Lapha kukhonjiswa ishadi lentengo yesitoko yezikhathi ezihlukile. Isonto lonke, Microsoft Corporation in US dollar intengo yesitoko eshintshwe ngu 5.69%. Ngonyaka, Microsoft Corporation in US dollar intengo yesitoko eshintshwe ngu 49.03%.
Izingcaphuno ze-Stock Microsoft Corporation US dollar
MSFT Ukuze US dollar (USD)
Namuhla, 10 stock of Microsoft Corporation ithengwa 2 062.60 US dollar. Ungashintshana 5 156.50 US dollar ye 25 stock of Microsoft Corporation. Namuhla, 50 stock of Microsoft Corporation ithengwa 10 313 US dollar. Namuhla, 20 626 US dollar ingathengiswa 100 stock of Microsoft Corporation. Namuhla, 250 stock of Microsoft Corporation ingashintshaniswa 51 565 US dollar. Ungashintshana 500 stock of Microsoft Corporation ye 103 130 US dollar.
MSFT umlando wesilinganiso samasheya
Namuhla 206.26 USD = 500 stock of MSFT. 30 June 2020, 1 stock of Microsoft Corporation = 199.15 US dollar. Microsoft Corporation in US dollar 26 June 2020 - 196.33 US dollar. Okuphezulu MSFT / USD intengo yamasheya ngaphakathi yayivuliwe 02/07/2020. Ubuncane be- MSFT / USD intengo yesitoko ngenyanga edlule ibiku 19/06/2020.
Isabelo esisodwa se-Microsoft Corporation namuhla sise-206.26 $. Intengo yezabelo ze-MSFT ishintshele ku-+3.45% noma ku-+7.11 USD kusukela ngosuku lokugcina lokuhweba. Ungathenga amasheya angu-100 we-Microsoft Corporation ngo-20 626 US dollar noma uthengise amasheya angu-50 we-MSFT ngo-10 313 US dollar.
I-Microsoft Corp inkampani yobuchwepheshe.Ithuthukisa, ilayisensi, futhi isekela imikhiqizo eminingi nezinsiza eziningi. Ibhizinisi layo lihlelwe ngezigaba ezintathu: Ukukhiqiza kanye neBhizinisi Izinqubo, I-Intelligent Cloud, ne-Personal Personal Computing.
Izabelo ze- Microsoft Corporation namuhla, intengo yesitoko MSFT i-intanethi manje.
Shintshanisa amasheya MSFT ku-intanethi
Microsoft Corporation izingcaphuno zesitoko ngesikhathi sangempela, MSFT intengo yamasheya ku-inthanethi, ishadi MSFT.
Microsoft Corporation Ukuze US dollar ishadi kusukela ekuqaleni kokuhweba.
Microsoft Corporation izimali ezinkulu
Ivolumu yokuhweba lama-MSFT amasheya namuhla nomlando wemali ka-Microsoft Corporation.
Izezimali Microsoft Corporation
Izigaba Microsoft Corporation
Izinsuku zokukhokha izinzuzo ezikwabelweni ze-MSFT, isivuno sokwabiwa kwemali ku-MSFT amasheya ngo-2020.
Microsoft Corporation inzuzo ngayinye ngayinye
Imali engenayo emithathu yenkampani Microsoft Corporation, ibika ngenzuzo yentengo MSFT ngonyaka ka-2020.
Izimali Microsoft Corporation
Bika imiphumela yemali yenkampani Microsoft Corporation, Microsoft Corporation engenayo yonyaka ngonyaka ka-2020.
Ukulinganisa kwenkampani Microsoft Corporation
Microsoft Corporation esimweni somhlaba